बिहे भोजमै बेहुलाले गरे बेहुलीको ह’त्या, जन्ती र पाहुना जति सबै तमासे बनेपछि! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > बिहे भोजमै बेहुलाले गरे बेहुलीको ह’त्या, जन्ती र पाहुना जति सबै तमासे बनेपछि!
बिहे भोजमै बेहुलाले गरे बेहुलीको ह’त्या, जन्ती र पाहुना जति सबै तमासे बनेपछि!
admin October 8, 2020 October 8, 2020 अन्तराष्ट्रिय, समाज	0
एजेन्सी, २२ असाेज । बिहेकै दिन बेहुलाले कु’टेर बेहुलीको ह’त्या गरेका छन् । घटनाको रुसको नोबासिबिरिकको हो । ३३ वर्षका यी बेहुलाले अन्य पाहुनाकै अगाडी बेहुलीलाई कु’टेर मा’रेका हुन् । ओकासाना नामकी बेहुली ३६ वर्षकी थिइन् । डरका कारण बेहुलीलाई बचाउन भने कोही पनि सरेनन् । यस पार्टीमा सबै पाहुनाहरु र’क्सीले मा’तेका थिए ।
प्रहरीले आरोपित युवकलाई पक्रा’उ गरिसकेको छ । प्रहरी स्रोतकाअनुसार स्टिफन डोलगिख नामका यी युवक यसअघि पनि ह’त्या तथा लु’टपा’टको आरोपमा जेल बसिसकेका छन् । डोलगिखले पुरानो अपराधका लागि जेल जीवन बिताइरहेका बेला ओकसानासँग उनको चिनजान भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसपछि उनीहरुले बिहे गर्ने फैसला गरेका थिए । स्थानीय प्रहरीकाअनुसार बिहे भोज चलिरहेका बेला बेहुला–बेहुलीबीच झ’गडा भयो, त्यसपछि बेहुला आवेशमा आए । र’क्सीले मा’तेका बेला अन्य एक युवकको डा’हा लागेपछि उनले श्रीमतीमाथि कु’टपि’ट थाले ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी किरिल पित्रुसिनका अनुसार यी युवकले युवतीमाथि मु’क्का प्र’हार गर्ने र उनलाई ला’त्तीले हा’न्ने काम पाहुनाहरुकै अगाडि गरेका थिए । त्यसपछि उनले घरभित्र लगेर थप कु’टेको, कपाल ता’तेर टाउकोमा हि’र्काएर र सडकमा लगेर फालेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
रातको १ बजे कोठामा आएर भनि, ‘मलाई चाहियो’